Akụkọ - Xiao Jie gara Haikou iji nyochaa ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ dị elu nke mba
Xiao Jie gara Haikou iji nyochaa ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ọgbara ọhụrụ nke mba
N'ụtụtụ nke Nọvemba 27th, Xiao Jie, onye otu Kọmitii Kwụsị nke Kọmitii Party nke Ọchịchị na Mịnịsta nke United Front Work Department, gara Haikou iji nyochaa owuwu na mmepe nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ dị elu. O kwusiri ike mkpa ọ dị ịnọgide na-etinye mmụọ nke National Private Economic United Front Work Conference, gbalịsie ike imeziwanye ọnọdụ azụmahịa, na-eduzi ụlọ ọrụ iji melite ogo akụ na ụba, arụmọrụ na asọmpi isi site na teknụzụ nke teknụzụ, ma gbalịsie ike itinye aka na iwu nke Hainan Free Trade Port. Maazị Xiao gara Hainan Huayan Collagen Technology Co., na Hainan Yeguo Foods Co., Ltd. wee gee akụkọ banyere nrụpụta ụlọ ọrụ na mmepe site n'aka Mr. Guo Hongxing na Nwada Zhong Chunyan, ndị isi nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ, letara mmepụta na R&D noo, wee gwa ndị ọrụ ụlọ ọrụ okwu ihu na ihu. Mmụọ nke Oge Mgbakọ nke Ise nke Kọmitii Etiti nke 19 nke Kọmunist nke China, ma tụlee ma gbanwere mkparịta ụka banyere okwu na-ekpo ọkụ na nke siri ike nke ụlọ ọrụ na-elekọta na amụma Hainan Free Trade Port.
MaazịXiao gosipụtara na ụlọ ọrụ Huayan na ụlọ ọrụ Yeguo, dị ka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ dị elu nke mba na-ejikọ nyocha na mmepe ngwaahịa, mmepụta, na ire ahịa, nwere ngalaba azụmaahịa, ụdị ọrụ, atụmatụ mmepe, na teknụzụ ndị nwere ikike ikike ọgụgụ isi nweere onwe ha. akara na mmepe nke Hainan Free Trade Port. Ositionkwado, atụmanya ahụ sara mbara nke ukwuu. Companylọ ọrụ Huayan ga-agbachitere ebumnuche nke "itinye aka na azụmahịa collagen na ijere ahụike mmadụ", na-aga n'ihu na-etolite mmepe nke ndụ mmiri Hainan na akụ azụ, ma kwalite mmepe na-aga n'ihu nke ụlọ ọrụ peptide collagen. Yelọ ọrụ Yeguo ga-enyerịrị ọrụ nke onye nchoputa na onye isi nke ụlọ ọrụ mkpụrụ osisi aki oyibo, wee gbalịa iwulite nnukwu ụlọ ọrụ na-arụpụta akị bekee na China na ụwa. Ọ gbakwara ụlọ ọrụ abụọ ahụ ume ka ha gaa n'ihu na-ewusi obi ike ha na mmepe n'okpuru ndabere nke owuwu nke Hainan Free Trade Port, ma na-akwalite mmụọ achụmnta ego pụtara ìhè na ọrụ aka nke "na-ebute ụzọ" na "ịkata obi ịdu ụwa" ; na-ekwusi ike na mmepe ohuru na mmụba na-aga n'ihu n'ahịa asọmpi na isi ihe ndị bụ isi, na-eji ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ dị ka ikpo okwu na ebe a na-enweta mmiri iji nweta ntọala siri ike, gaa ụwa, ma chọọ mmepe ka ukwuu; mejuputa ihe “ahụike abụọ” chọrọ, ma kwalite azụmaahịa ọ bụla na-eto eto.
Maazị Xiao kwusiri ike na Port Hainan Free Trade Port nwere uru na-enweghị atụ n'ihe gbasara ọnọdụ nhazi, ebumnuche mmepe, yana isi amụma. Ihe owuwu nke Free Trade Port bụ ezigbo oge maka ndị ọchụnta ego nke onwe ha ịmalite azụmaahịa ha. Frontlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ na United Front na Federation of Industry and Commerce na ọkwa niile dị n'ógbè ahụ, dị ka ndị isi na ndị na-eduzi mmepe nke akụ na ụba onwe ha, ga-amụta, kpọsaa, ma mejuputa okwu dị mkpa nke General Secretary Xi Jinping na mmụọ nke Nkeji nke ise nke Nzukọ Ndị Isi nke 19 dị ka oge dị ugbu a na ọdịnihu. Ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ isi bụ iwu ụlọ ọrụ ịkwụsị ụgbọ mmiri, mgbasa ozi na ọzụzụ, ma kwalite mmejuputa nke "nyiwe atọ"; ọ dị mkpa iji nlezianya ịhazi mmejuputa atumatu dị mkpa maka enyemaka ụlọ ọrụ, iwusi nduzi nkewa ike, yana itinye atumatu dabere na ụlọ ọrụ na ogige ntụrụndụ; gaa n'ihu na-eji "mkpesa" "Site na ụgbọ oloko", guzobe ndepụta nke nsogbu ụlọ ọrụ, ma jiri usoro iji kwalite ngwọta nke nsogbu ụlọ ọrụ; anyị ga-enyerịrị ike zuru oke maka uru nke usoro ọhụụ nke ọrụ jikọrọ ọnụ wee ghọta "mmejuputa ise", ya bụ, mejuputa atumatu, mejuputa atumatu, mejuputa oru, mejuputa oru, mejuputa njikwa, nye nhazi ulo oru na nkwa oru ụlọ ọrụ nkeonwe ịbanye, itinye ego ma wuo na Hainan, ma jikọọ aka mepụta azụmaahịa na-enye aka maka mmepe ahụike nke akụnụba nkeonwe.
Kang Baiying, onye osote onye isi oche nke United Front Work Department nke Kọmitii Mpaghara Ọchịchị; Chen Jianjiao, onye osote Mịnịsta na onye isi nke Officelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Omume China na Mpaghara; Wang Sheng, Onye isi oche oge niile nke Federation of Industry and Commerce; Zheng Boyan, onye otu Kọmitii kwụ ọtọ nke Kọmitii Party nke Obodo Haikou na Mịnịsta nke。